musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » New Calgary to Seattle ndege paWestJet izvozvi
New Calgary to Seattle ndege paWestJet izvozvi.
New trans-border ndege inopembererwa sekiyi kumikana mitsva yehupfumi, kushanya uye tsika pakati peAlberta nePacific Northwest.
WestJet yakatanga nzira yayo nyowani yepasirese inobatanidza Calgary neSeattle kekutanga.
Kuenda kweWS3612 yakatakura vashanyi makumi matanhatu nepfumbamwe kwakaratidza nzira itsva yekutanga yeWestJet yepasi rose pasi pemitemo mitsva yeHurumende yeCanada yekudzivirira vafambi nevashandi.
Nendege nyowani yeWestJet inodarika-muganho ichashanda kana pasvondo kuti itange uye ichawedzera kusvika kaviri pazuva nechirimo 2022.
nhasi, WestJet, pamwe chete nehurumende yakakosha uye vashandi veindasitiri, yakatanga nzira yayo nyowani yekubatanidza vashanyi kekutanga pakati peCalgary ne Seattle. Kusimuka kwendege WS3612 kwakaratidza chiitiko chikuru chekudzoreredza kuWestJet sekutanga kwendege kuyambuka muganhu kubvira denda risati raitika.
"Isu tinofara kukurudzira kubatana kwakananga pakati peCalgary ne Seattle kekutanga munzira yakamirirwa nevaenzi vedu nemaguta ese ari maviri,” akadaro Chris Hedlin. WestJet, Mutevedzeri weMutungamiriri, Network uye Mibatanidzwa. "Nzira iyi ichasimbisa hukama hwehupfumi pakati pematunhu uye ichasimudzira hupfumi hwevashanyi veAlberta sezvatinoramba tichisimbisa network yedu yekuyambuka kubva kuCalgary."
Kuenda kweWS3612 kwakatakura vaenzi makumi matanhatu nevapfumbamwe WestJetYekutanga nzira itsva yepasirese yekubva pasi peHurumende yeCanada yemitemo mitsva yekudzivirira yevafambi nevashandi.
"Kuvimbika mukufamba kuri kukura sezvinoratidzwa nekudiwa kwekubhururuka kwemazuva ano uye mitemo inofanira kushanduka kuti itsigire nzira yekufamba-yakazara yekufamba," akaenderera mberi Hedlin. "Nhasi chiitiko chakakosha mukuzvipira kwedu kudzoreredza hupfumi hwevashanyi veCanada uye tine tarisiro yekuti ticharamba tichiona kufambira mberi mukurerutsirwa kwemitemo yemuganho iri kukanganisa kugona kwemuenzi wedu kufamba pakati peCanada neUS pasina mutsetse nemhepo, vari panyika.
Ruzivo rwebasa idzva reWestJet pakati peCalgary neSeattle:
Nzira maitikiro Start date
Calgary - Seattle 4x vhiki nevhiki November 4, 2021
6x vhiki nevhiki December 20, 2021
1x zuva nezuva March 28, 2022
2x zuva nezuva Dai 19, 2022
Seattle – Calgary 4x vhiki nevhiki November 4, 2021